ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ Planner လုပ်ကြမယ် | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
ပိုက်ဆံမကုန်ပဲ Planner လုပ်ကြမယ်
သင်က တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆို Plan ချပြီးလုပ်တတ်တဲ့သူလား??ဒါဆိုရင် ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်ထားနိုင်ပြီး Plan လုပ်လို့ရမယ့်အကောင်းဆုံး Planner လေးတွေကို သိသင့်တာပေါ့။
ကိုယ်က Content Creator လား? Designer လား? IT Technician လား ဘာဖြစ်ဖြစ် ဒီ App လေးတွေ Website လေးတွေက အသုံးဝင်မှာပါ။
ဘယ်အရာတွေက အရေးကြီးလဲ ဆိုတာတွေ ထားထားလို့ ရတယ့်အပြင် မေ့မသွားအောင်လည်း Remainder လေးတွေ ထားလို့ရပါသေးတယ်။Free သုံးလို့ရတယ့်အပြင် Application လေးလည်း ရှိတဲ့အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖုန်းနဲ့ အသုံးပြုလို့ရတာမို့လို့ လူကြိုက်များတဲ့ Planner လေးတစ်ခုပါ။
ဒီ App လေးမှာဆိုရင် Notes တွေမှတ်လို့ရမယ့်အပြင် အသုံဖိုင်တွေကိုပါ မှတ်ထားနိုင်မှာပါ။အဓိကကတော့ Small Business လေးတွေအတွက် တော်တော်အသုံးတည့်တဲ့ Planner လေးပါ။
ဒီ App လေးတွေကတော့ iOs ပေါ်မှာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့ အမိုက်စား App တစ်ခုလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအထိ အသုံးပြုနိုင်ပြီးတော့ လူကြိုက်များတဲ့ App တစ်ခုပါ။
လုံးဝကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ သုံးရလွယ်တဲ့ App တစ်ခုဖြစ်ပြီး များသောအားဖြင့်ကတော့ Digital Teams တွေမှာ အသုံးပြုကြပါတယ်။အလကားလည်း သုံးလို့ရသေးတယ်နော်။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ အလုပ်လုပ်လို့ရတယ့်ဟာဆိုရင် Trello ကိုပဲညွှန်းရမှာပါပဲ။ချစ်စရာ Sticker လေးတွေလည်း ပါတာမို့လို့ စမ်းသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။
Business Read 138 times